Tirada dhimashada daadadka Sudan oo gaartay 121 qof. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Tirada dhimashada daadadka Sudan oo gaartay 121 qof.
Tirada dhimashada daadadka Sudan oo gaartay 121 qof.
Ciidamada Difaaca Madaniga ah ee Suudaan ayaa shaaciyey in tirada dadka ku dhintay daadadka dalkaas ay gaareen 121 qof, Afhayeenka Golaha Qaranka ee Difaaca Madaniga ah ee Suudaan, Col Cabdul Jalil C/raxiim, ayaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay in waxyeello weyn ay ka soo gaartay dhulalka beeraha ee gobollo dhowr ah, isagoo carabka ku adkeeyay in kooxaha difaaca madaniga ah ay ka shaqeynayaan sidii loo xaddidi lahaa saameynta masiibada.
Dhanka kale, Gudiga Sare ee Xaaladaha Degdegga ee Suudaan waxay shaaciyeen in dhammaan gobollada dalka ay hadda saameeyeen daadad, iyagoo xusay in Caasimadda Khartuum ay ugu badantahay marka la fiiriyo saamaaynta.
Wasiirka shaqada iyo horumarinta bulshada iyo madaxa guddiga sare ee xaaladaha deg degga, Liina Al-Sheikh, ayaa sheegtay in tirada dadka ay dhibaatadu saameysey ay hada kor u dhaaftay in ka badan 770 kun oo qof guud ahaan gobolada kala duwan ee dalka Suudaan.
Previous articleGargaar la gaarsiinayo in ka badan 2,000 oo ruux oo uu saameeyay Webiga Shabeelle.
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Banaadir oo dhagax dhiggay Xarunta ilaalada deegaanka Xamar iyo waaxda Dad dhigista+SAWIRRO.